fbမှာ ပုံတင်တာ သိက္ဓာ မရှိတာတဲ့လား... - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / fbမှာ ပုံတင်တာ သိက္ဓာ မရှိတာတဲ့လား...
fbမှာ ပုံတင်တာ သိက္ဓာ မရှိတာတဲ့လား...
Apann Pyay 10:34 AM ဗဟုသုတအစုံ Edit
fbမှာ ပုံတင်တာ သိက္ဓာ မရှိတာတဲ့လား လုံးဝ လက်မခံပါဘူး fb ဆိုတာ အမြင်ကောင်း နှင့် ကြည့်ရင် တစ်ကယ် ကို ရှာဖွေစရာ မှတ်သားစရာ အတုယူစရာများ နှင့် ပြီးပြည့် စုံနေသော ရသ သုတ ကြွယ်ဝတဲ့ နေရာ တစ်ခုပါပဲ !!!! fbဆိုတာ လူသားတွေ အတွက် တီထွင်ထားတော့ လူအမျိုးမျိုး စရိုက်အမျိုးမျိုး ခံယူချက်အမျိုးမျိုး သဘောထား အထွေထွေ ရှိနေတာ တစ်ကယ်တော့ မဆန်းပါဘူးလေ !!! fbဆိုတာ သူတစ်ပါးကို မထိခိုက်ဘူး မိမိကိုယ်မိမိ လည်း မထိခိုက်ဘူး ဆိုရင် ရင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ စိတ်ခံစားမှု တွေဖြစ်တဲ့ ဝမ်းနည်းခြင်း ပျော်ရွှင်ခြင်း ရင်ခုန်ခြင်း စတဲ့ တေးသွားတွေ ကဗျာတွေ စာတွေ ဓာတ်ပုံတွေ အားလုံးဖြင့် ရင်ဖွင့်တဲ့ နေရာတစ်ခုပါ !!သူငယ်ချင်းတွေကို လည်း မိမိက မျှဝေပီး ခံစားစေချင်သလို မိမိကလည်း သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ရင်ထဲက အရာတွေ ထပ်တူခံစား နားလည်ပေးတဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုပါ !!! fbမှာ ဓာတ်ပုံတင်တာ သိက္ခာမရှိတဲ့ အလုပ် မဟုတ်ပါဘူး !!အရှက်မဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး !!မြှူ ဆွယ်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး !!တန်ဖိုးမဲ့တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး !! မိမိ ဝါသနာအရ မိမိစိတ်ခံစားမှု အရ မိမိ အကောင့်ကို မိမိ ဓာတ်ပုံနှင့် တင်တာ တစ်နည်းအားဖြင့် မိမိ ရိုးသားခြင်း ကို ပြလိုက်တာပါ !!! fbမှာ ဓာတ်ပုံတင်တာ အရှက်မဲ့တာ သိက္ခာ မရှိတာလို့ သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် ဓာတ်ပုံမတင်တဲ့ လူတွေက သိက္ခာရှိပီး အရှက်တရား ရှိသူတွေဆိုတာ သေချာလား ?? ဆိုလိုချင်တာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ပုံတင်တာ မတင်တာနှင့် တိုင်းတာ ဝေဖန် အပြစ်တင်သူတွေ အားလုံးကို လုံးဝ ကန့်ကွက်ပါတယ် !!ဒီပေတံဟာ လုံးဝ တန်ဖိုးမရှိတဲ့ ပေတံပါ !!လူတစ်ယောက်ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို စိတ်ဓာတ်နှင့် တိုင်းတာသာ အမှန်ဆုံး ပေတံပါ !!တစ်နည်း အားဖြင့် ကိုယ်ကျင့်တရားပေါ့ !!! fbမှာ ပုံတင်တိုင်း ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်တာမှ မဟုတ်တာ ပုံတင်ရုံဖြင့် ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်တယ်ဆိူရင် ပုံမတင်တဲ့ လူတွေက ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းတာ သေချာ လား ??ဆိုလိုချင်တာက ပုံတင်တဲ့ ကိစ္စကို ပေတံတိုင်း သုံးသပ်နေတာ လုံးဝ မဖြစ်သင့်ပါဘူး !!!!!နောက်ဆုံး ကုန်ကုန် ပြောရရင် sex အကောင့်သုံးတဲ့ လူတွေကလည်း သူတို့ အကောင့်ကို sex အကောင့်ပါလို့ ဝန်ခံထားတာပါ!! sex အကောင့်ပါလို့ ဝန်မခံပါဘဲ ဘုရားပုံ တင် သံဃာပုံတင် စာပေအကောင်းတွေတင်ပီး sex ချက်နေတဲ့ အကောင့်တွေကလည်း အများကြီးပါ !!! ဆိုလိုချင်တာက အရာအားလုံးကို ပုံသေတွက်လို့ မရပါဘူး !!fbမှာ ပုံတင်တယ်ဆိုတာ အကောင်းမြင်စိတ်နှင့် ကြည့်မယ်ဆိုရင် တစ်နေ့တာ မှတ်တမ်းတွေ ခရီးတွေ အလုပ်တွေ စိတ်အပန်းဖြေ နေရာတွေ အားလုံးကို မိမိ သူငယ်ချင်းတွေကို မျှဝေခံစား ရင်ဖွင့်တဲ့ သဘောပါ !!! လူတစ်ယောက်ကို fbမှာ ပုံတင်တာ မတင်တာကို ကြည့်ပီး ဝေဖန်တယ်ဆိုတာ fbသုံးသူတွေကို စော်ကားလိုက်တာပါ ပုံတင်ပီး အဆင့်မရှိသူ ရှိတယ် !!ပုံမတင်လည်း အဆင့်မရှိသူ ရှိတယ် !!sex အကောင့်မှာ တစ်ချို့ လုပ်ကြံမှုကြောင့် ပုံအတင်ခံရတာတွေ ရှိတယ် !!sex အကောင့်က ပုံတိုင်းကို လည်း အထင်သေးလို့ မရပါဘူး !!ဘုရားပုံတင်ထားတဲ့ လူတွေကိုလည်း အထင်ကြီးလို့ မရပါဘူး !!!!ဲfbမှာ ပုံတင်ရုံဖြင့် အဆင့်အတန်း မရှိသူလို့ သတ်မှတ်တဲ့ လူဟာ တစ်ကယ်တော့ သူကိုယ်တိုင် အဆင့်မရှိတာပါ!! fbမှာ ပုံမတင်တာကို အဆင့်ရှိတယ်လို့ သတ်မှတ်သူဟာ လည်း တစ်ကယ်တော့ သူက ဦးနှောက်မရှိ အဆင့်မရှိသူပါ !! လူတစ်ယောက်ရဲ့အဆင့်အတန်းကို စိတ်ထားနှင့် ပိုင်းဖြတ် တာပါ !!ဒါကြောင့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ် အဆင့်အတန်းကို အကြား အမြင်နှင့် သေချာပါတယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ဖို့ ခက်ပါတယ် fbပေါ်က လူတိုင်းကို အထင်ကြီးစရာ မလိုသလို နှိမ့်ချစရာလည်း မလိုအပ်ပါဘူး!!ပုံတင်သူတိုင်းကို အထင် သေးစရာ မလိုသလို ပုံမတင်သူတိုင်းကိုလည်း အထင်ကြီး စရာ မရှိပါဘူး !!!မိမိလုပ်ရပ်က မည်သူ့မှ မထိခိုက်ရင်ဘဲ အဲဒီလူဟာ အဆင့်အတန်း ရှိသူပါပဲ !!!! ပုံတင်တာ မတင်တာထက် စာရေးသူ အနေနှင့် လေးစားစရာ ကောင်းသူကို လေးစားပါတယ် !!တန်ဖိုး ထားစရာ ကောင်းသူကို တန်ဖိုးထားပါတယ် !!ကိုယ်းကွယ် ထိုက်သူကို ကိုယ်းကွယ်ပါတယ် !!ရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေ ပါတယ် !!မှန်တဲ့ လူဘက်က ရပ်တည်ရဲသလို မှားတဲ့သူကိုလည်း ဆန့်ကျင်ရဲပါတယ် !!!စိတ်အဆင့်အတန်း ရှိပီး ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းသူ မည်သူမဆို အားလုံးကို မြတ်နိုးပါတယ် !!!အသိတရား မိမိထက် သာသူကို အတုယူ ကိုယ်းကွယ်ပါတယ် !!! ပုံတင်တာ အရှက်မဲ့တာ သိက္ခာမရှိတာ တန်ဖို့း မရှိတာတဲ့ ဖြစ်သင့်လား ???မိမိကိုယ်တိုင် တွေးပါ !!! စာရေးသူကတော့ လုံးဝ လက်မခံပါဘူးဗျာ !!! ပုံမတင်ဘူး ဆိုရင် အရှက်ရှိတာ သိက္ခာရှိတာ တန်ဖိုးရှိတာတဲ့ သေချာသလား ??? မိမိကိုယ်တိုင် တွေးပါ!! စာရေးသူကတော့ လုံးဝ မသေချာတဲ့ အရာပါလို့ ပြောချင် ပါတယ် လက်မခံပါဘူးဗျာ !!!! ပုံတင်သူတွေ ဘက်က ရေးတာမဟုတ်သလို ပုံမတင်သူတွေကိုလည်း ဝေဖန်ခြင်းလည်း မဟုတ်ရပါဘူး !!! အမှန်တရားကို ချပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ် !!!!အစွန်း ရောက်စွာ အပြစ်ပြော ဝေဖန်ခြင်းကို စာရေးသူ အမုန်းဆုံးပါပဲ !!!ထို့ ကြောင့် ဒီစာကို ရေးမိပါသည် !!!!!! ရှင်းလင်းချက် / ပုံတင်ရမယ်လို့ မဆိုလိုသလို ပုံတင်တာ ကောင်းတယ်လို့လည်း မပြောလိုပါ !!ပုံတင်တာကို အမှားတစ်ခုလို့ သတ်မှတ်တာကို ရှင်းပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်!!!! ဘာအရောင်မှ ခြယ်မထားပါ
fbမှာ ပုံတငျတာ သိက်ဓာ မရှိတာတဲ့လား လုံးဝ လကျမခံပါဘူး fb ဆိုတာ အမွငျကောငျး နှငျ့ ကွညျ့ရငျ တဈကယျ ကို ရှာဖှစေရာ မှတျသားစရာ အတုယူစရာမြား နှငျ့ ပွီးပွညျ့ စုံနသေော ရသ သုတ ကွှယျဝတဲ့ နရော တဈခုပါပဲ !!!! fbဆိုတာ လူသားတှေ အတှကျ တီထှငျထားတော့ လူအမြိုးမြိုး စရျိုကျအမြိုးမြိုး ခံယူခကျြအမြိုးမြိုး သဘောထား အထှထှေေ ရှိနတော တဈကယျတော့ မဆနျးပါဘူးလေ !!! fbဆိုတာ သူတဈပါးကို မထိခိုကျဘူး မိမိကိုယျမိမိ လညျး မထိခိုကျဘူး ဆိုရငျ ရငျထဲမှာ ရှိနတေဲ့ စိတျခံစားမှု တှဖွေဈတဲ့ ဝမျးနညျးခွငျး ပြျောရှငျခွငျး ရငျခုနျခွငျး စတဲ့ တေးသှားတှေ ကဗြာတှေ စာတှေ ဓာတျပုံတှေ အားလုံးဖွငျ့ ရငျဖှငျ့တဲ့ နရောတဈခုပါ !!သူငယျခငျြးတှကေို လညျး မိမိက မြှဝပေီး ခံစားစခေငျြသလို မိမိကလညျး သူငယျခငျြးတှရေဲ့ ရငျထဲက အရာတှေ ထပျတူခံစား နားလညျပေးတဲ့ ငွိမျးခမျြးတဲ့ နရောလေးတဈခုပါ !!! fbမှာ ဓာတျပုံတငျတာ သိက်ခာမရှိတဲ့ အလုပျ မဟုတျပါဘူး !!အရှကျမဲ့တာ မဟုတျပါဘူး !!မွှူ ဆှယျတာလညျး မဟုတျပါဘူး !!တနျဖိုးမဲ့တာလညျး မဟုတျပါဘူး !! မိမိ ဝါသနာအရ မိမိစိတျခံစားမှု အရ မိမိ အကောငျ့ကို မိမိ ဓာတျပုံနှငျ့ တငျတာ တဈနညျးအားဖွငျ့ မိမိ ရိုးသားခွငျး ကို ပွလိုကျတာပါ !!! fbမှာ ဓာတျပုံတငျတာ အရှကျမဲ့တာ သိက်ခာ မရှိတာလို့ သတျမှတျမယျဆိုရငျ ဓာတျပုံမတငျတဲ့ လူတှကေ သိက်ခာရှိပီး အရှကျတရား ရှိသူတှဆေိုတာ သခြောလား ?? ဆိုလိုခငျြတာက လူတဈယောကျရဲ့ အဆငျ့အတနျးကို ပုံတငျတာ မတငျတာနှငျ့ တိုငျးတာ ဝဖေနျ အပွဈတငျသူတှေ အားလုံးကို လုံးဝ ကနျ့ကှကျပါတယျ !!ဒီပတေံဟာ လုံးဝ တနျဖိုးမရှိတဲ့ ပတေံပါ !!လူတဈယောကျရဲ့ အဆငျ့အတနျးကို စိတျဓာတျနှငျ့ တိုငျးတာသာ အမှနျဆုံး ပတေံပါ !!တဈနညျး အားဖွငျ့ ကိုယျကငျြ့တရားပေါ့ !!! fbမှာ ပုံတငျတိုငျး ကိုယျကငျြ့တရား ပကျြတာမှ မဟုတျတာ ပုံတငျရုံဖွငျ့ ကိုယျကငျြ့တရား ပကျြတယျဆိူရငျ ပုံမတငျတဲ့ လူတှကေ ကိုယျကငျြ့တရား ကောငျးတာ သခြော လား ??ဆိုလိုခငျြတာက ပုံတငျတဲ့ ကိစ်စကို ပတေံတိုငျး သုံးသပျနတော လုံးဝ မဖွဈသငျ့ပါဘူး !!!!!နောကျဆုံး ကုနျကုနျ ပွောရရငျ sex အကောငျ့သုံးတဲ့ လူတှကေလညျး သူတို့ အကောငျ့ကို sex အကောငျ့ပါလို့ ဝနျခံထားတာပါ!! sex အကောငျ့ပါလို့ ဝနျမခံပါဘဲ ဘုရားပုံ တငျ သံဃာပုံတငျ စာပအေကောငျးတှတေငျပီး sex ခကျြနတေဲ့ အကောငျ့တှကေလညျး အမြားကွီးပါ !!! ဆိုလိုခငျြတာက အရာအားလုံးကို ပုံသတှေကျလို့ မရပါဘူး !!fbမှာ ပုံတငျတယျဆိုတာ အကောငျးမွငျစိတျနှငျ့ ကွညျ့မယျဆိုရငျ တဈနတေ့ာ မှတျတမျးတှေ ခရီးတှေ အလုပျတှေ စိတျအပနျးဖွေ နရောတှေ အားလုံးကို မိမိ သူငယျခငျြးတှကေို မြှဝခေံစား ရငျဖှငျ့တဲ့ သဘောပါ !!! လူတဈယောကျကို fbမှာ ပုံတငျတာ မတငျတာကို ကွညျ့ပီး ဝဖေနျတယျဆိုတာ fbသုံးသူတှကေို စျောကားလိုကျတာပါ ပုံတငျပီး အဆငျ့မရှိသူ ရှိတယျ !!ပုံမတငျလညျး အဆငျ့မရှိသူ ရှိတယျ !!sex အကောငျ့မှာ တဈခြို့ လုပျကွံမှုကွောငျ့ ပုံအတငျခံရတာတှေ ရှိတယျ !!sex အကောငျ့က ပုံတိုငျးကို လညျး အထငျသေးလို့ မရပါဘူး !!ဘုရားပုံတငျထားတဲ့ လူတှကေိုလညျး အထငျကွီးလို့ မရပါဘူး !!!!ဲfbမှာ ပုံတငျရုံဖွငျ့ အဆငျ့အတနျး မရှိသူလို့ သတျမှတျတဲ့ လူဟာ တဈကယျတော့ သူကိုယျတိုငျ အဆငျ့မရှိတာပါ!! fbမှာ ပုံမတငျတာကို အဆငျ့ရှိတယျလို့ သတျမှတျသူဟာ လညျး တဈကယျတော့ သူက ဦးနှောကျမရှိ အဆငျ့မရှိသူပါ !! လူတဈယောကျရဲ့အဆငျ့အတနျးကို စိတျထားနှငျ့ ပိုငျးဖွတျ တာပါ !!ဒါကွောငျ့ လူတဈယောကျရဲ့ စိတျ အဆငျ့အတနျးကို အကွား အမွငျနှငျ့ သခြောပါတယျလို့ ဆုံးဖွတျဖို့ ခကျပါတယျ fbပျေါက လူတိုငျးကို အထငျကွီးစရာ မလိုသလို နှိမျ့ခစြရာလညျး မလိုအပျပါဘူး!!ပုံတငျသူတိုငျးကို အထငျ သေးစရာ မလိုသလို ပုံမတငျသူတိုငျးကိုလညျး အထငျကွီး စရာ မရှိပါဘူး !!!မိမိလုပျရပျက မညျသူ့မှ မထိခိုကျရငျဘဲ အဲဒီလူဟာ အဆငျ့အတနျး ရှိသူပါပဲ !!!! ပုံတငျတာ မတငျတာထကျ စာရေးသူ အနနှေငျ့ လေးစားစရာ ကောငျးသူကို လေးစားပါတယျ !!တနျဖိုး ထားစရာ ကောငျးသူကို တနျဖိုးထားပါတယျ !!ကိုယျးကှယျ ထိုကျသူကို ကိုယျးကှယျပါတယျ !!ရိုသထေိုကျသူကို ရိုသေ ပါတယျ !!မှနျတဲ့ လူဘကျက ရပျတညျရဲသလို မှားတဲ့သူကိုလညျး ဆနျ့ကငျြရဲပါတယျ !!!စိတျအဆငျ့အတနျး ရှိပီး ကိုယျကငျြ့တရား ကောငျးသူ မညျသူမဆို အားလုံးကို မွတျနိုးပါတယျ !!!အသိတရား မိမိထကျ သာသူကို အတုယူ ကိုယျးကှယျပါတယျ !!! ပုံတငျတာ အရှကျမဲ့တာ သိက်ခာမရှိတာ တနျဖို့း မရှိတာတဲ့ ဖွဈသငျ့လား ???မိမိကိုယျတိုငျ တှေးပါ !!! စာရေးသူကတော့ လုံးဝ လကျမခံပါဘူးဗြာ !!! ပုံမတငျဘူး ဆိုရငျ အရှကျရှိတာ သိက်ခာရှိတာ တနျဖိုးရှိတာတဲ့ သခြောသလား ??? မိမိကိုယျတိုငျ တှေးပါ!! စာရေးသူကတော့ လုံးဝ မသခြောတဲ့ အရာပါလို့ ပွောခငျြ ပါတယျ လကျမခံပါဘူးဗြာ !!!! ပုံတငျသူတှေ ဘကျက ရေးတာမဟုတျသလို ပုံမတငျသူတှကေိုလညျး ဝဖေနျခွငျးလညျး မဟုတျရပါဘူး !!! အမှနျတရားကို ခပြွခွငျးသာ ဖွဈပါတယျ !!!!အစှနျး ရောကျစှာ အပွဈပွော ဝဖေနျခွငျးကို စာရေးသူ အမုနျးဆုံးပါပဲ !!!ထို့ ကွောငျ့ ဒီစာကို ရေးမိပါသညျ !!!!!! ရှငျးလငျးခကျြ / ပုံတငျရမယျလို့ မဆိုလိုသလို ပုံတငျတာ ကောငျးတယျလို့လညျး မပွောလိုပါ !!ပုံတငျတာကို အမှားတဈခုလို့ သတျမှတျတာကို ရှငျးပွခွငျးသာ ဖွဈပါတယျ!!!! ဘာအရောငျမှ ခွယျမထားပါ